Uzwakalise ukukhathazeka ngesimemezelo uMasipala wase oLundi – Sivubela intuthuko Newspaper
Osesithombeni Sodolobha Khansela Wilson Ntshangase
Lokho kulandela isimemezelo sesabelomali esenziwe nguNgqongqoshe Wezempilo uMhlonishwa uNomagugu Zulu, maqondana nokusungulwa kwesibhedlela esisezingeni eliphezulu eMhlathuze eMpangeni nezinye izinto zomphakathi ezixhaswe nguhulumeni ezihlelelwe uMkhandlu waseMhlathuze.
UMhlathuze unezibhedlela ezimbili zomphakathi; Isibhedlela Empangeni Hospital (NPA) indawo enakekela izifo ezibucayi nesibhedlela i-Ngwelezane District Hospital, nezibhedlela ezintathu ezisebenza kahle, eziphethwe kahle, nezibhedlela ezizimele ezicebile, isibhedlela iBay, Umtholampilo waseMpangeni naseMelomed.
Zonke lezi zibhedlela zinikeza ukungenelela kwezokwelashwa ngaphansi kwendawo yaseMhlathuze ezingatholakali kuzo zonke izindawo zabantu abamnyama enyakatho yeKwaZulu Natali. UNgqongqoshe Wezempilo wenza lesi simemezelo ngenkathi uMhlathuze evele ethokozela izikhungo ezixhaswe nguhulumeni ezitholakala eMpangeni njengeNyuvesi yaseZululand eMpangeni, ijele Qalakabusha Prison isizinda saseMedium A Prison eMpangeni, isikhungo semfundo University of Zululand eRichards Bay, nezinye izikhungo zikahulumeni kumasipala ofanayo. , ukubala okumbalwa.
UMasipala uMhlathuze ungamakhilomitha ayi-100 ukusuka endaweni yasoLundi engamakhilomitha angama-250 ukusuka eDumbe, amakhilomitha angaba ngu-150 ukusuka kwaNongoma, amakhilomitha angaphezu kuka-150 ukusuka oPhongola, Jozini nakwaMhlabuyalingana. Zonke lezi zindawo ezazikade zibhuqabhuqwa ububha nenhlupheko futhi ezasemakhaya zihlala abantu bakithi abamnyama kusukela ekuqaleni kwentando yeningi akakaze ziyazi intuthuko exhaswa nguhulumeni waKwaZulu Natali kanye neNingizimu Afrika nengxenye yesabelomali sikaNgqongqoshe Wezempilo esifundazweni. Mhlonishwa uNomagugu Zulu uzinikela eMpangeni.
Kusho ukuthi uhulumeni wethu isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-20 wentando yeningi usathuthukisa uhlangothi lomthetho we-Group Areas Act, lapho konke ukutshala imali kukahulumeni kubekwe eceleni ezindaweni zabantu abamhlophe.
Njengomasipala wasemakhaya, oLundi sikhathazekile ukuthi zonke izindawo zabantu abamnyama kuphela enyakatho nesiFundazwe ngenkathi kuqala uHulumeni wentando yeningi sithola isabelo esifinyeziwe kakhulu kuMgcinimafa, imali eyisibonelelo esingaphansi kakhulu sokuthuthukiswa kwengqalasizinda (MIG from Cogta), okanye imali eyisibonelelo esingaphansi kukagesi (INEP evela eDoE), ayitholakali ngenxa yamanani entengo angenakushintshwa, ngenkathi uhulumeni evuma amanani entela asindayo ka-Eskom kufaka phakathi izinhlawulo ezinzima ezingasebenzisi ukusetshenziswa kwemali okufana nokuxhaswa ngemali ephezulu kukagesi kagesi wasemakhaya oMasipala okhokha njalo kwa-Eskom kanye ukwehluleka njalo kweminye iminyango kaHulumeni ukukhokhela amanani kanye nezinsizakalo ngesikhathi. Konke lokhu akwehli kahle futhi kwakha uzungu lokuphonsela inselelo unomphela uHulumeni ikakhulukazi ezindaweni ezazincishwe inkululeko enyakatho nesifundazwe.
Njengemiphakathi ehlala ezindaweni zasemakhaya sikhathazekile kakhulu ngesenzo sikhahulumeni nalapho ebonakala echitha imali yabakhokhi bentela ephindelela ezindaweni ezicaphuna kusale.
Ngakho-ke sinxusa uNdunankulu wesifundazwe sethu u Mhlonishwa uSihle Zikalala kanye nesigugu aphethe naso esishayamthetho angenelele kulesi sikhalo sethu njengoba sibona abantu bakithi abahluphekayo beqhubeka nokuba ngondingasithebeni. Basazoqhubeka nokubhuqabhuqwa ububha, indlala nezifo ezahlukene ezindaweni zasemakhaya kunikezwe uMhlathuze ovele unazo izinsiza.